Fiji - Famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana | Fiaretana haran-dranomasina
Fiji - Famerenana amin'ny laoniny ny tontolo iainana
Fampiasana Coran Restoration sy Ecotourism hampitombo ny fandraisana anjara eo an-toerana sy tombontsoa ara-bola amin'ny ezaka fitantanana ny harena
Distrikan'i Korolevu-i-wai, Baravi, Nadroga / Navosa, Fidji
Fianakaviana Coral Fidji - Atsimo Andrefana Viti Levu
Ny tetikasa dia tarihina ao amin'ny Toeram-piompiana mpanjono mahazatra an'ny Vanua Davutukia, ao amin'ny distrikan'i Korolevu-i-wai ao Provinz Nadroga / Navosa, Nosy Fidji.
Ny Fitrandrahana haran-dranomasina Fiji no lehibe indrindra any Pasifika Atsimo ary manome fisarihana fisakafoanana sy tombontsoa amin'ny fizahan-tany izay mpandray anjara amin'ny harin-karena fototra voalohany ary tafiditra ao anatin'izany ny fiaraha-monina, ny kolontsaina ary ny fahaveloman'ny vondrom-piarahamonina Fijiana. Ny morontsiraka atsimo-andrefan'i Viti Levu, izay nosy lehibe indrindra sy malaza indrindra any Fiji, dia naparitakin'ny rafitra lava lozam-piaramanidina lava indrindra ao amin'ny firenena ary fantatra amin'ny anarana hoe Coral Coast hatramin'ny nanombohan'ny fizahan-tany tany amoron-dranomasina tao amin'ny 1950. Ny sakany, marivo farihy feno maroloko trondro sy ny voahangy fotsiny metatra any an-dafin'ny fotsy torapasika no kisary izay nanao ny Coral Coast malaza ary ny tonian'ny farany 50 taona no namorona nandroso fizahan-tany ny toe-karena amin'izao fotoana izao manjohy ny mihoatra noho 20% ny Fidji ny mpizaha tany . Hatramin'ny fotoana amam-potoana, ireo vatohara ireo dia nanohana ny filàn'ny mponina indizeny. Na dia izany aza, ny tontolo voajanahary mahavariana mahavariana izay nanjary famantarana ny morontsirak'i Coral dia simba noho ny fiantraikan'ny fiantraikany eo an-toerana amin'ny fanerena haingana ny fanjifana sy ny fampiroboroboana amoron-dranomasina miaraka amin'ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro manohintohina ny fihodinan'ny toekarena eo an-toerana sy ny fivelomana sy ny filaminan'ny sakafo tanàna kely amoron-tsiraka sy tanàna kely.
Toerana ao amin'ny distrikan'i Korolevu-i-wai ao amin'ny nosy Viti Levu, izay lehibe indrindra amin'ireo nosy 300 + any Fiji. Sary © Reef Explorer Fiji Ltd./Map avy amin'ny Google
Ny Korolevu-i-Wai distrika no misy ao am-pon'ny ny Coral Coast ary ahitana ny efatra tanàna nentim-paharazana ny Votua, Vatuolalai, Tagaqe, ary Namada anivon'ireo izay tanàna maro, faritra fonenana, ary ny fizahan-tany ny fandrosoana dia interspersed. Amin'ny ankapobeny, ny distrika dia manana mponina miisa mihoatra ny 2,350 izay mipetraka amin'ny tokantrano maherin'ny 420, latsaky ny antsasa-manila ireo tompony ireo tompon'andraikitra ao amin'ny distrika. Manerana ny moron-dranomasina dia misy toeram-ponenana maro sy trano fandraisam-bahiny izay manolotra efitrano fivoriana 450, amin'ny ankapobeny amin'ny toerana natokana ho an'ny tompon-tany. Ny rafitra momba ny harambato mifanakaiky dia manodidina ny 9km2 any amin'ny faritra ary ny Fitrandrahana mahazatra an'ny Vanua Davutukia, tompon'ireo tompon-tany teratany ao amin'ny distrika. Ny rafitra haran-dranomasina dia miankina amin'ny ankamaroan'ny fianakaviana ao amin'ny distrika mba hihaona amin'ny fikarakarana sakafo ao an-tokantrano, ary indrindra indrindra rehefa miantsena ny fizahan-tany ary ny fahafaha-manao asa sy ny fidiram-bola dia midina. Ao amin'ny 2000, ny haran-dranomasina Fiji dia nijaly noho ny hetsi-panoherana goavambe voalohany navoaka voalohany izay niteraka fahafatesan'ny vatohara marobe. Ny haran-dranon'i Korolevu-i-wai dia namoy ny ampahany tamin'ny vatany velona tamin'ny alàlan'ny ala mikitroka (izay ahitana ny asa fanjonoana sy fizahan-tany indrindra) izay tena voa mafy. Ny fiantraikany eo an-toerana amin'ny fanodinkodinana sy ny fanao fanjonoana hafa manimba ny tontolo iainana sy ny fifandonana mifandraika amin'ny fikorontanan'ny toetrandro dia nanimba tanteraka ny tontolo iainana momba ny haran-dranomasina mba hahatonga ny vondrom-piarahamonin'ny haran-dranomasina tsy afaka ny hiverina amin'ny fantsona 2000. Ireo vatolampy Korolevu-i-wai indray dia manana misokatra amin'ny varavarankely vaovao<10% fonony haran-dranomasina velonamanokatra fisie PDF , dia be loatra ny ahi-maitso, ary ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaosalantsalanymanokatra fisie PDF Ho an'ny hazakaza-davitra sy ny tsipika dia ambany noho ny 200 gm ny trondro / olona / ora.
Ny Vanua Davutukia ny Korolevu-i-Wai distrika nanomboka tamin'ny an-dranomasina fitantanana ny harena ezaka in 2002 miaraka amin'ny fanohanana ao amin'ny Oniversiten'i Pasifika Atsimo ny Institute of Applied Siansa (USP-IAS) sy Fidji eo An-toerana-Managed Marine Faritra (FLMMA) fandaharana. Ny drafitra tsotra momba ny fitantanana ny distrika izay nahitana ny loza mitatao amin'ny loharanom-bola sy ny fanalefahana ny fepetra tokony horaisina dia novolavolaina sy nekena.
Korolevu-i-wai ny drafi-pitantanana ny vondrom-piarahamonina an-tsitrapo momba ny ranomasina 2014-2019. Ireo faritra tsy mandray dia asiana mena sy volomboasary ary voamariky ny taona naharetan'izy ireo, ny tanàn-drazana dia voamariky ny kintana ary nomena anarana, ny fitsipika fanampiny izay ampiharina amin'ny sehatry ny jono dia voatanisa eto ambany, ary ny sary roa havanana ambany dia mampiseho ny nentin-drazana lanonana sy tolotra hananganana ny drafi-pitantanana hatramin'ny 2014 ka 2019. Sary © Reef Explorer Fiji Ltd.
Tamin'ny 2006, nanomboka niara-niasa akaiky tamin'ny Reef Explorer ny Vanua Davutukia mba hampihatra sy handinika ny drafi-pitantanan'izy ireo ary hanara-maso ny fahombiazan'ny asany. Andiam-pampianarana, fikarohana ary fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina no notanterahina mba hamahana ny laharam-pahamehana miaraka amin'ny asa fandrindrana fitantanana be dia be sy ny fandinihana ny drafi-pitantanana ny harena an-dranomasina any amin'ny taona 2007 ary ny taona 2014. Ny tanjona faratampony amin'ny drafi-pitantanana dia ny hampatanjaka ny eo an-toerana fidiram-bola sy fomba amam-panao amin'ny alàlan'ny famenoana sy famelomana indray ireo harena an-dranomasina eo an-toerana - fomba ifotony mankany amin'ny fampandrosoana any ambanivohitra sy ny fiarovana ny harena voajanahary. Ny drafitra fitantanana dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny teknika fandraisana anjara ary ao anatin'izany ny fametrahana ireo faritra arovana tsy misy fakana an-dranomasina (MPA), ny fampiharana ny jono ary ny fanarahan-dalàna, ny famahana ny fandrahonana amin'ny fandotoana, ny fampandrosoana ny orinasa ary ny fanaraha-maso biolojika sy sosialy mba hampiasaina amin'ny fitantanana adaptive ny asa fiarovana sy fampandrosoana ny fiaraha-monina. 6 ka hatramin'ny 10 taona taorian'ny nananganana azy ireo, ny MPA dia manana rakotra velona velona 500 heny ary manan-karena 50% lehibe kokoa amin'ny haran-dranomasina noho ny faritra fanjonoana mifanila aminy, tsy misy ahidrano ary 30% ny trondro fisakafoanana, karazana hazandrano 50% fanampiny , ary hazandrano biomassa 500% bebe kokoa noho ireo faritra manjono izay mifanila aminy ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTechnical Reportmanokatra fisie PDF ).
Ny famolavolana ny fambolena haran-dranomasina sy ny ezaka famerenana amin'ny laoniny dia iray amin'ireo hetsika nanampiasan'ny Reef Explorer ny vohitra distrika hatramin'ny 2006. Ity hetsika ity dia nanomboka tao amin'ny tanàna MPA, indrindra fa fitaovana fanabeazana sy toekarena, saingy nivoatra ho lasa singa manan-danja sy fitomboan'ny hetsika fitantanana, indrindra fa toy ny fepetra fiovan'ny toetrandro ary ny hisolorana ny tanànan'ny tanàna amin'ny tontolo iainana sy ny fiarovana.
Mampiasa tobim-pivarotana amin'ny disc ao amin'ny iray amin'ny tranokalanay matevina izahay mba hanaparitahana ireo karazana haran-dranomasina izay tsy mora mivelona amin'ny tady, toy ny corals izay misy fambolena na foliose. Ny disc cement dia miraikitra amin'ny rindran-tariby mesh ary avy eo ny felana haran-dranomasina dia mipetaka amin'ny tobin'ny simenitra miaraka amin'ny fantsom-pifandraisana efa nomanina mialoha. Sary © Reef Explorer Fiji Ltd.
Satria ny vatohara dia karazana vato lehibe amin'ny tontolon'ny vatohara manome ny fonenana ilaina ary raha tsy izany dia manohana ny fiainana tsy manam-paharoa mahatalanjona, ilaina ny famerenana indray ny valan-javaboary ho fanarenana sy ny tanjaky ny jono eto an-toerana ary ny fikajiana ny harena an-dranomasina. Noho ny fanampian'ny vondron'olona tanora dia natsangana tamin'ny tanànan'ny Corolevu-i-wai efatra ny tobim-paritry ny tanimbary ary ny toerana iray feno dia nitarina ary tamin'ny 2016 ny zanatany kolontsaina vaovao 7000 + dia naparitaka isan-taona mba hampiasaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny.
Ny lalantsara tady no fomba mora sy mahomby indrindra handefasana corals vaovao amin'ny karazany rehetra izay manana morpholo manenjana. Ny sombin-tariby misy kofehy dia apetaka amin'ny tady misy fefy misy ny kofehy tsirairay amin'ny famatsiana amin'ny haran-dranomasina mitovy habe aminy. Sary © Reef Explorer Fiji Ltd.
Ny fanatanterahana ny fahombiazan'ny MPA amin'ny fanampiana ny fanarenana ny vondron'aina, ny kolontsara haran-dranomasina dia miparitaka amin'ny corals izay hita ao amin'ny MPA amin'ny alàlan'ny fanaparitahana ireo zanatany mpamatsy vola voafantina na fanangonana sombin-dranomasina tsy voafatotra. Ny zanatany fanomezana nofidina voafetra dia misy ny razana lava mandefitra hafanana izay fantatra mandritra ny hetsika fandoroana haran-dranomasina, fa amin'ny tranga sasany dia tsy fahita firy any amin'ny toerana no ampiasaina ho mpamatsy ho an'ny sombin-javatra. Ireo sombin-tariby misy volom-bavony dia mipoitra amin'ny tady na simenitra amin'ny 'akoran-kafe' mandra-lehibe kokoa (6-10 volana) ary avy eo miverina any amin'ny vatohara any amin'ny toerana famerenana amin'ny laoniny.
Vantany vao nitombo ny valan-javaboary (6-10 volana) dia vonona hiverina ao anaty haran-dranomasina izy ireo. Voalohany, tapaka ireo hety amin'ny fanesorana ny tady tafahoatra alohan'ny hamindrana azy ao anaty harona mankany amin'ny toerana famerenana amin'ny laoniny. Sary © Reef Explorer Fiji Ltd.
Ireo faritra misy ny vatohara izay tsy manana haran-dranomasina, na dia mety ho trano fonenana mety aza dia voafantina ho toerana famerenana amin'ny laoniny ny vatohara naparitaka. Amin'ny alàlan'ny fanampiana ny faritry ny haran-java-miaina hatraiza hatraiza ny rakotra haran-dranomasina sy ny harena manankarena amin'ny alàlan'ny haran-dranomasina, ny famerenan'ny haran-dranomasina dia azo ampiasaina ho paikady fampifanarahana toetrandro ary manana anjara toerana lehibe amin'ny fampiroboroboana ny vondron-tobin'ny valanina ilaina hanohanana ny jono. fampivoarana amin'ireto faritra ireto. Amin'ny alàlan'ny fanomezana fisintomana izay azo ampiasaina amin'ny orinasa ecotourism eo an-toerana, ny famerenan'ny haran-dranomasina dia afaka manampy amin'ny fanomezana toe-karena ihany koa hanamafisana ny fampiasana maharitra sy fitehirizana ny harena an-dranomasina.
Ny fandaharana ataonay dia mifantoka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny vatohara ny vatoharan-dranomasina izay efa fantatsika nandritra ny hetsika fitrandrahana mafana. Ireo transplants 2018 misy fifandeferana amin'ny Acropora fruticosa ity dia mampiseho fandeferana tsara ary ny corals hafa kosa dia mandeha amin'ny vatohara manodidina azy ireo dia efa manomboka miposaka mandritra ny vanim-potoana mafana amin'ny 2019. Ny karazan-java-maniry samihafa mitovy dia nambolena eo akaikin'ny tsirairay mba hanampiana hampiroborobo ny famokarana fahombiazana miaraka. Sary © Reef Explorer Fiji Ltd.
Amin'ny ankapobeny, ny vatoharan ny karazana Acropora dia nofidina ho fampielezana satria mihamitombo haingana izy ireo ary mitondra anjara betsaka amin'ny habetsahan'ny toeram-ponenana sy ny fahasamihafan'ny karazan-karazan-javamaniry rehetra hita amin'ny vatohara salantsalany. Na izany aza, ny karazana vatohara hafa (Porites, Montipora, Pocillopora, Stylophora, Seriatopora, Echinopora, Merulina, Hydnophora, ary Psammocora) dia naparitaka satria izy ireo dia fototarazo générale ao amin'ny vondron-dranomasina, azo ampiasaina hanampiana amin'ny fiarovana sy ny fanamafisana ny substrate, ary / na mahatanty ny setroka mafana fo ary tsy dia misy fiantraikany amin'ny fanirian'ny alikaola-tsilo. Amin'ny fitambarany, ireo vovoka maro karazana mihoatra ny 50 corals mafy dia ampiasaina amin'ny ezaka famerenana amin'ny laoniny.
Ny paikadin'ny famindrana dia misy ny famoronana fivoriam-boaroana mifangaro amin'ny faritra ambany hita. Amin'ireo paty ireo, ny tsimoka maro karazana mitovy dia nambolena teo akaikin'ny tsirairay mba hanampiana hampiroborobo ny famokarana fahombiazana miaraka mandritra ny volana vitsivitsy. Miaraka amin'ny fizotran'ny fomba fidina tsara ho an'ny zanatany mpamatsy vola, io paikady io dia tsy afaka mampitombo ny fonon-tanety miaraka amin'ny haran-dranomasina miorim-paka ihany, fa koa manamafy ny fahombiazan'ny sangan'asan'ireo filam-pamoretana mandefitra ity. Sary © Reef Explorer Fiji Ltd.
Ny haran-dranomasina dia matetika alefa any amin'ny faritry ny haran-dranomasina, amin'ny fampiasana ny simenitra sy ny plaster. Ny vatohara dia nafindra amin'ny fivoriam-paritra mifangaro ao amin'ny toerana famerenana amin'ny laoniny mba hanatsarana ny fahavelomana sy ny fahombiazan'ny fiterahana ireo andian-drazana mandefitra hafanana. Ireo haran-dranomasina dia ampiasaina ihany koa amin'ny fikarohana ny fandalinana ny fandeferana amin'ny hafanana sy ny ekolojika miteraka.
Rehefa miasa amin'ny tontolo angovo mahery vaika isika, dia mila apetraka amin'ny toerany ny haran-dranomasina mba hahatratrarana ny tenany ao anaty haran-dranomasina. Ny fomba tiantsika indrindra amin'ny fanaovana an'ity dia ny fampiasana fangaro amin'ny simenitra, ny plaster ary ny fasika amoron-dranomasina tsara raha ny rano no ambany ary ny rano mihetsika. Ny fangaro dia vita amin'ny baolina, napetraka eo amin'ny substrate brased, ary ny corals vaovao apetraka amin'ny ampahany amin'ilay simenitra. Sary © Reef Explorer Fiji Ltd.
Mifanaraka amin'ny fametrahana ny tobim-paritry ny haran-dranomasina, ampian'i Reef Explorer ny vondrona tanora mba hamolavola drafitra sy fahaiza-manao amin'ny fitsangatsanganana ny fitsangatsanganana ny valan-javaboary ary toerana famerenana amin'ny laoniny ny MPA tsirairay avy. Ankehitriny, ny fitsangatsanganana snorkeling dia tanterahan'ny tanora ao amin'ny tanàna roa amin'ny efatra manome tombontsoa sy tombontsoa ara-bola ho an'ireo vohitra.
Hatramin'ny 2006, ny vatany 50,000 + izay misy karazany mihoatra ny karazana 50 dia naparitaka ary nafindra indray tany amin'ny haran-javaboary tao amin'ny vohitra MPAs, ary ny tanora dia nahazo fiofanana fototra amin'ny teknika fampielezana ny valan-javaboary lafo, ny ekolojia ary ny fauna, ary ny fampidirana ity asa ity fitsangantsanganana snorkeling.
Arotsaka indray ny haran-dranomasina any amin'ny faritra ambanin'ny tany malefaka izay be fikolokoloana tsara, mijanona ao anaty rano mandritra ny rano mihena, ary raha tsy izany dia ao anatin'ny tontolo mety tsara amin'ny fambolena haran-dranomasina. Amin'ny ankapobeny, ny vatam-paty 2-4 dia mifatotra isaky ny faritra 1 m2 amin'ny faritry ny vatohara miankina amin'ny alàlan'ny corals efa eo amin'ny farany. Sary © Reef Explorer Fiji Ltd.
Rehefa nandroso ny asa famerenana ny haran-dranomasina dia misy mpitsidika iraisam-pirenena nitsidika manokana mba hianatra sy hitandrina ny tetikasa ary hanampy amin'ny ezaka famindrazana ny haran-dranona ao anatin'izany ny governemantan'i Tokyo, ny solontenan'ny firenena an-dranomasina (LMMA) eo an-toerana, avy amin'ny lafin'ny Azia-Pasifika. ireo firenena mpikambana, ny governemantan'i Fiji sy ny ONG, ny mpianatra Fijian, ny mpandraharaha Amerikana sy Aostralianina dia mandinika fandaharana any ivelany amin'ny oniversite amerikanina sy any Aostralia, ary ireo mpiasan'ny tontolo iraisam-pirenena maro sy ny mpanabe an-dranomasina avy amin'ny manodidina ny Karaiba sy Pasifika. Ny fitsidihana mpitsidika dia nanome vola amina an'arivony amin'ny kitapom-pokontany, tanora an-tanandehibe, ary efa nampiasaina mba hamolavolana ny ezaka fanarenana ny vatohara. Ankoatr'izay, ny teknika fampielezankevitra dia nalain'ny mpikaroka amerikana nandritra ny taona maro izay manome fidiram-bola misimisy kokoa ho an'ny vondron'olona eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fanomanana sy ny famelomana ny corals ho ampiasaina amin'ny andrana.
Haran-dranomasina iray ary nanongotra ny lohany haran-dranona izay naverina tamin'ny laoniny nangalarina. Sary © Reef Explorer Fiji Ltd.
Ity programa famerenana haran-dranomasina ity dia ezaka ho an'ny mpanamory hafa mba hianarana sy nahatonga ny fanatsarana ny fahaiza-manao sy ny fanarahan-dia ary ny paikady momba ny tontolo iainana. Ny ezaka natao dia nitondra dolara an'arivony ho eo an-tanan'ny mponina ary nanohana ny fanohizana sy fanitarana ny ezaka fambolena haran-dranomasina sy fananganana hery ho an'ny mpitari-dalana. Amin'ny ankapobeny, ny asa famerenana ny vatohara dia nanatsara ny ezaka fiarovana amin'ny ranomasina an-toerana amin'ny alàlan'ny:
Fanomezana tombontsoa ara-ekonomika ho an'ny fiarovana;
Fametrahana ny fandraisana anjaran'ny tanora ao an-tanàna amin'ny ezaka fiarovana ny tontolo iainana;
Manatsara ny fahalalana eo an-toerana momba ny tantaram-piainana momba ny haran-dranomasina sy ny tontolo iainana momba ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny 'fianarana amin'ny tanana'
Manampy ny ezaka amin'ny fitantanana ny vondrom-piarahamonina miaraka amin'ny indostrian'ny fizahan-tany any Fiji; ary
Manampy ireo vondron-piaramanidina hanangana sy hampifanaraka ny fiakaran'ny rano amin'ny ranomasina hanohanana ny jono eto an-toerana sy ny haran-dranomasina.
Ireo lesona manan-danja nateraky ny famerenana ny famerenana ny haran-dranomasina tamin'ny taona 13 farany dia ahitana:
Ny fomba fampielezana ny harena an-kibon'ny tany tahaka izany dia azo hianarana sy hampiharina tsy tapaka amin'ny mpikambana ao amin'ny vondrona ho an'ny ezaka famerenana amin'ny famokarana coral.
Corals amin'ny endriny Acropora, na dia matetika ampiasaina amin'ny ezaka famerenana amin'ny laoniny aza, dia ireo no tena mora voan'ny aretina sy ny fahasimban'ny biby. Ny fampiroboroboana karazam-pirazanana maro samihafa manerana ny faritry ny garderie dia manampy amin'ny fampihenana ny fandrobana sy hanatsarana ny fahombiazan'ny ankapobeny.
Ny ezaka famerenana amin'ny laoniny dia mahomby kokoa sy mahomby ao amin'ny faritra tsy misy atahorana, faritra misy fari-pahamendrehana tsara, ary / na faritra misy vatomamy misy populaire mahasalama.
Ny fitantanana matanjaka ao an-toerana sy ny fanohanana sy ny fandraisana anjaran'ny fiarahamonina dia manakiana ny fahombiazan'ny fitantanana ny haran-dranomasina sy ny famerenana amin'ny laoniny. Ny fampandraisana anjara ny tanora ao an-tanàna amin'ny ezaka miaraka amin'ny mpitarika sy ny zokiolona dia mampirisika ny fanarahan-dalàna sy ny fitohizan'ny vokatra.
Ireo tanjona ara-toekarena dia manohana bebe kokoa ny fanohanan'ny fiarahamonina sy ny fandraisana anjara amin'ny fitantanana ny haran-dranomasina.
Ny fampifangaroana indray ny famerenana ny haran-koditra amin'ny hetsika fanangonam-bola toy ny fitsangatsanganana snorkeling dia afaka manatsara ny tombotsoan'ny fiarahamonina amin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fikarakarana ny fiompiana rehefa manome fanohanana ara-bola ny ezaka.
Mandra-pahatongan'ny 2015, ny vola hanohanana ny ezaka famerenana ny haran-dranomasina dia nomen'i Reef Explorer amin'ny alàlan'ny fanamorana ny programa momba ny fizahantany sy fikarohana momba ny fizahana. Fanomezana iray taona avy amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSylvia Earle Alliance - Mission Blue tamin'ny Mey 2015, ny PADI Foundation tamin'ny taona 2016, ary ny fanohanan'ny Hakuto Life Science tamin'ny 2017, 2018, ary ny 2019 dia natokana ho an'ny fanitarana sy fikojakojana ireo asa fanarenana ny haran-dranomasina ao amin'ny Distrikan'i Korolevu-i-wai. Ilaina ny vola fanampiny hanohanana ny fampiharana ireo hetsika fampandrosoana, fanabeazana, fikarohana momba ny tontolo iainana sy fiaraha-miasa amin'ireo vondrona tanora any amin'ny distrika mifanila aminy.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoReef Explorer (Fiji) Ltd. - mifandraisa amin'i Victor Bonito - staghorncoral@hotmail.com
mamorona mailaka vaovaoNy ivon'ny fikajiana ny ranomasina
Vanua Davutukia avy ao Korolevu-i-wai (tompon'ny indizeny)
University of the South Pacific, Institute of Applied Science (mpiara-mitantana mpiara-mitantana)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSylvia Earle Alliance - Mission Blue
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamerenana vatohara any Fiji
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoIt Takes a Village: any Fiji, ny famonjena ny haran-dranomasina dia fifanarahana ifotony
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTetikasa Blog: Famerenana amin'ny laoniny ny Fiangonan'ny Coral any Fiji